जीवनशैली – SagunKhabar
आजदेखि चैतेदशैँ शुरु : देवीको पूजा उपासना गरी देशभर मनाईंदै
Uncategorized अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्वार्ता अपराध अर्थ खेलकुद प्रवास
हाम्रो समाजमा सेक्सका बारेमा खुलेर कुरा गर्ने चलन कमै छ । झन सेक्स कसरी भन्ने बारेमा जान्ने उत्सुकता भएपनि लाज हुन्छ भनेर चुप लाग्छन् । तर, सुखद जीवनका लागि सुखद सेक्स लाइफ हुनु जरुरी हुन्छ । आम जीवनमा सेक्स आधारभुत आवश्यकता नै हो । जसरी…
धनी बन्न केही गर्नु पर्दैन् ? अप्नाउनुहोस् मात्र यी ९ सुत्र
एजेन्सी । बिजनेश र रियलटाईम फाइनान्सीयल मार्केटबारे जानकारी दिने बिजनेश स्टाटिजीस्ट ब्लगर डैन वाल्डस्चिमिदले सफलताको सुत्रहरु पत्ता लगाएका छन्। यस्ता छन् सुत्रहरु : १. हरेक व्यवसायिक जानकारीसँग अपडेट रहनुहोस्। नयाँ बिचार, आइडिया र…
सुत्दा कुन बस्तु सिरानी नजिक हुँदा के हुन्छ हानी ?
काठमाडौं । रातमा राम्रो निद्रा पर्यो भने त्यसले एकातर्फ शारीरिक थकान पूरा गर्छ भने अर्कातर्फ मानसिक शान्ति प्राप्त हुन्छ । तर वास्तुशास्त्रका अनुसार केही यस्ता चिजहरु छन् जसले राति सुत्ने समयमा सिरानी नजिक राख्नु हुँदैन । त्यस्ता…
छोरा या छोरी जन्माउने भन्ने निश्चित गर्न सेक्स क्यालेन्डर
गर्भ राख्दा नै छोरा या छोरी निश्चित गर्न सम्भव रहेको दाबी अझै हराएको छैन ।गर्भको सन्तान गर्भ राख्ने दिनमै निश्चित गर्न सघाउन चिनिया क्यालेन्डर, जापानी क्यालेन्डर लगायतका धेरै क्यालेन्डर पछ्याउनेहरुको संख्या अझै उस्तै छ । के यो सम्भव विधि…
महिला र पुरुषको विचको सम्बन्धको शुरुवात सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । महिला सामान्यतया पुरुषमा केही कुरा खोज्छन् । यिनी कुरा पाए भने महिला पुरुषसँगको सम्बन्धमा खुशी र सन्तुष्ट रहन्छन् । के कुरा चाहन्छन् त पुरुषमा महिला ? १ सुन्दरतापछि…
महिलाले विवाहअगाडि यौनसम्पर्क राखे नराखेको कुरा थाहा पाउन सामान्य मान्छेले पहिलो यौन सम्पर्कको बेला रगत आए नआएको वा दुखेन दुखेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ । अर्कातिर पुरुषमा लिंगको अगाडिको छाला फाटे नफाटेको,…
केटीहरु ब्रेकअप पछि पनि पूर्व प्रेमीको बारेमा सोच्छन् यी ८ कुराहरु ! जान्नुहोस
केटीहरु पहिलो लभमा परे भने तन र मन दुवै दिन्छन् । त्यसैले केटीहरुको लागी पहिलो माया विशेष हुन्छ । तर केटाहरको तुलनामा पहिलो माया अलि कम हुन्छ । जसले गर्दा केटीहरु आफ्नो पहिलो लभ ब्रेकअप भएपनि भुल्दैनन् । त्यसैले उनीहरुको पहिलो लभ सफल…
विश्वका विभिन्न समाजमा पुरुषले युवती भन्दा विवाहित परस्त्रीसँग सम्भोग गर्न मनपराउँछन् । यो मनोवैज्ञानिक स्वाभाव पनि हो ।तर, परस्त्रीले पुरुषलाई कसरी आकर्षित गर्छ भन्ने कुरामा भरपर्छ । कुनै कुनै परस्त्री यस्ता हुन्छन् । जसलाई देख्नेवित्तिकै…
तपाईको कुन राशी ? मेष, कर्कट, कन्या र वृश्चिक राशी भएकाले नछुटाइ पढ्नुहोला
एजेन्सी । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार हरेक मानिसको व्यक्तित्व उनीहरुको राशि अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ। कयौँ ज्योतिषशात्रका अनुसार तपाईको जति आधुनिक भएपनि यस कुरालाई नकार्न सकिदैन् की राशि अनुसार मानिसको ग्रह र नक्षत्रमा गहिरो प्रभाव पर्ने…
धनकी देवी मानिने लक्ष्मी मातालाई प्रसन्न गर्नको लागि मानिसहरु अनेक प्रकारको उपाय र कार्यहरु गर्ने गर्दछन् । महालक्ष्मीको पूजा र आराधना गर्नाले धन र समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास समेत रहेको छ । हिन्दु धर्मअनुसार, यदि तपाई देवी लक्ष्मीलाई खुशी…